Silicone isikhunta for ice - okuthile okuwusizo futhi ezidingekayo ekhishini. Kulula kakhulu ukusebenzisa, futhi kulula ukuze amnakekele. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi yesimanje ikhishi izesekeli ukunikela ikhasimende izinto eziningi ezithakazelisayo ukuthi umane dazzled! Jabulela iziphuzo ice? Believe me, cubes abakwazi kuphela kuphole kubo, kodwa futhi ukudala isimo salo lonke iqembu. Manje kufanele bakwazi ukubona lokhu.
Yiqiniso, ifomu ezidingekile ice ezenziwe ekhaya. Kodwa ungakwazi ukuyisebenzisela ezinye izinjongo. Ngokwesibonelo, iyiphi cosmetologist uyazi eziningi zokupheka eyokusiza ukulondoloza ubuhle kanye ngobusha kwesikhumba. Thela isikhunta umhluzi chamomile izidakamizwa kanye nqabela. Lezi cubes - Perfect yomuntu Skin. Sula isikhumba sabo e-T-zone.
Godu kuthiwani nengabe amaseli musa sigcwale amanzi nobisi? Ingabe umphelelisi ephelele eya ikhofi. Ikakhulukazi ewusizo for cubes anjalo esikhathini amahora ekuseni ikhwane uma kungekho isikhathi ukulinda isiphuzo kudambe.
Uma ugcwalisa isikhunta nge ushokoledi encibilikisiwe u hlanganise Nuts okugazingiwe, omisiwe futhi izingcezu amabhilikosi omisiwe noma asithena, kumhambele candy emangalisayo okuzenzela. Vele akudingeki uwafihle efrijini, zingabantu ngokuphelele zastynut emazingeni okushisa okuvamile.
Ngisho isikhunta ingasetshenziswa izikhala. Ngokuqina tamp imifino yabo, uthele amafutha, ulithumele efrijini. Ebusika, ungasebenzisa izingcezu ice ngoba nososo kusaladi. Idayisi uzoqhubeka zonke flavour of ehlobo.
Silicone isikhunta for ice plastic esisebenzayo. Awunayo knock phezu kwetafula ukususa icicles. Lokhu kwaziswa akesabi okushisa aphansi noma ephakeme. Njengoba kulula ugeze off noma yimuphi umkhiqizo, ngisho amafutha. Ukuphila inkonzo ifomu enjalo ibalwa amashumi eminyaka, ngoba cishe akunakwenzeka umonakalo.
Futhi impilo abicah iphephile, ngoba akasabeli ukudla namanzi.
Ezisetshenziswa kakhulu classical abicah isikhunta ukuze iqhwa. Cubes nje jikelele. Uma abanandaba fashion ukushintsha futhi ngifuna into uzokwazi ukujabulela iminyaka eminingi, mhlawumbe, lena inketho yakho.
Popular namuhla kanye namafomu okuthuthukile. Okunamandla, isilwane imifanekiso yezinto zokudlala, izinhliziyo mahle ephathini kumnandi. Ngaphandle abicah isikhunta ukuze iqhwa kungenzeka banoma iyiphi isayizi. Uthola ncamashi okufunayo - ngisho amabhola esikhulu, nakuba kusakazeka izinkanyezi encane. Khetha ukuthi ukuthanda.
Sicabangela izithakazelo abakhiqizi futhi epatager. Wena asesabi ice skull e nogologo Fougeres? Futhi kuthiwani namazinyo zamanga ngosayizi ophelele? Noma, uthi, izingcezu zeqhwa ngesimo amabhomu esikhulu osezingeni izinhlamvu?
Uma uhlela ingqikithi party, akusho ukuthi ukusebenzisa evamile naseqhweni. Lokhu ngeke kusimangaze ubani. Futhi lapha, isibonelo, piastres pirate kungaba iyisibusiso real futhi wenze sokuqala.
Mhlawumbe kungase zilwane engavamile kakhulu isikhunta ukuze iqhwa ubizwe yewayini. Kuzo ongazisebenzisa isibhamu cocktail noma imimoya. Lokhu kunjalo, ikakhulu umqondo omuhle ehlobo. Ngokuvamile abicah isikhunta for ice ngesimo izitsha utshwala elisetshenziswa isizini ashisayo. Qiniseka ukuze uthumele cocktail tube, ngoba zonke izimenywa uthanda uthinte izindebe zakhe emaphethelweni ice.
Phela, ngokuzikhethela batheleka amanzi fomu. Ungasebenzisa ayo zemvelo, lemonade noma iziphuzo ezibandayo. Ngo ukusebenza egqamile iwayini ezifana izibuko uyobheka mihle nakakhulu, futhi ukunambitheka isiphuzo okufakiwe benze engavamile.
Indesit SB 167. seziqa Indesit: Uhlolojikelele, izici, amamodeli izibuyekezo abanikazi
Ungangitshela lapho kukhona khona i-ore igolide